Sedona, AZ • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fanosotra vatana any Sedona, AZ.
Sedona dia tanàna iray izay mifanila amin'ny faritry ny distrika eo anelanelan'ny faritany Coconino sy Yavapai any amin'ny faritra avaratr'i Verde Valley any amin'ny fanjakan'i Arizona Arizona. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, 10,031 ny isam-poniny. Ny ankamaroan'ny tanàna dia ao amin'ny County Yavapai, miaraka amin'ny ampahany any atsinanana no misy azy ao amin'ny County Coconino. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary mikosoka ny vatana ao Sedona, AZ.